अशोज १७ गते आईतबार,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! – Gandaki Chhadke
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) :आफ्नो स्वाभावमा संयमता अपनाउनु होला । मानसिक रुपमा थकित महसुस गर्नुहुनेछ। परिश्रमको तुलना फल कम प्राप्त हुनेछ। सन्तानको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। कार्य व्यस्तताको कारण परिवारमा खासै ध्यान जाने छैन । सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) :मनोबल बढ्ने हुँदा कुनै पनि कम सहजै सम्पन्न हुनेछ । साथै काममा सफलता प्राप्त हुनेछ। बाबुको पक्षबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरु सिक्नमा रुचि राख्नेछन्। सरकारी काममा आर्थिक सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। सन्तानको लागि पुजी लगानी गर्न सकिने छ ।
मिथुन- का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) :आजको दिन नयाँ योजनाको लागि अनकुल समय रहेको छ । सरकारी लाभ र उच्च अधिकारीहरुबाट काममा उचित फल प्राप्त हुनेछ । भाइबहिनी र छिमेकीहरु बिच भएको विवाद कम हुनेछ । विचार परिवर्तन हुने अधिक सम्भावना रहेको छ ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) :मनमा नकारात्मक भावना आउन सक्छ । शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ महसुस गर्न सकिने छैन । निराशा र असन्तुष्टिको भावना दिमागमा रहनेछ। विद्यार्थीहरुको लागि सोचे अनुसाको परिणाम प्राप्त नहुन सक्छ ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) :तपाईमा आत्मविश्वास बढ्ने छ । कुनै पनि कामको लागि छिट्टै निर्णय लिन सकिने छ । बुबा र बृद्धहरुबाट लाभ हुनेछ। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्न सक्छ। बोली र व्यवहारमा उग्रता कम गर्नु होला अन्यथा समस्यामा पर्न सकिन्छ । क्रोधको मात्रा उच्च रहन सक्छ। स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) :विशेष सावधान रहन पर्ने दिन रहेको छ । कसैसँग विवादमा फस्न सकिने हुँदा सजग रहनु होला । शारीरिक थकान र मानसिक तनाव हुनेछ। साथीहरु सँग विवाद हुनेछ। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। आकस्मिक धन खर्च हुन सक्छ। झगडाबाट टाढा रहनुहोस्।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) :दिन अत्यन्तै शुभ रहेको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट भएको लाभको कारण मन प्रसन्न हुनेछ । आकस्मिक धन लाभको सम्भावना रहेको छ । आम्दानी पनि बढ्न सक्छ। साथीहरुबाट लाभान्वित भइने छ । रमाइलो यात्रा हुनेछ । स्त्री मित्रसँग भेट हुँदा मन प्रसन्न हुनेछ ।
वृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) :दिन तपाईको लागी शुभ रहनेछ । व्यापार व्यवसायमा वातावरण अनुकूल रहनेछ। उच्च अधिकारीहरु तपाईसँग खुसी हुनेछन्। तपाइँको हरेक काम आज सफलतापूर्वक पूरा हुनेछ। तपाईको प्रतिष्ठा बढ्नेछ। जागिरमा पदोन्नति पनि हुन सक्छ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) :स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आउन सक्छ । शारीरिक रुपमा आलस्यता अनुभव हुनेछ । मनमा चिन्ता रहन सक्छ। व्यवसायमा वाधा आउनेछ। संकट जनक विचारबाट टाढा रहनु होला । कुनै योजना बनाउदा सावधानीपूर्वक बनाउनुहोस्।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) :अचानक धन खर्च हुन सक्छ । यो खर्च स्वास्थ्यको कारण पनि हुनसक्छ । व्यावहारिक वा सामाजिक कामको लागी बाहिर जान पर्ने सम्भावना हुन सक्छ । खान पानमा विशेष ध्यान दिनु होला । जागिर वा व्यवसायमा समय अनुकूलता रहनेछ।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) :प्रेम जोडीको लागि समय अनकुल रहेको छ। काममा तपाईको आत्मा विस्वास र दृढ मनोबलको साथमा सम्पन्न गर्न सक्नु हुनेछ । रमाइलो यात्राको सम्भावना रहेको छ । उत्तम भोजन र नायाँ वस्त्र प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको छ । वाहनको शुख प्राप्त हुनेछ ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) :दिन शुभ रहेको छ । तपाईको आत्मविस्वास तथा मनोबल बढ्ने छ । शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। घरमा सुख र शान्तिको वातावरण रहनेछ। बोली तथा व्यवाहारमा विशेष ध्यान दिनु होला । सहकर्मीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । माइतीबाट सन्देश आउने छ ।